Ubomi belizwe | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: Ubomi belizwe
Indlela yokuthenga inkukhu encinane
ezaposwa ngomhla 07.11.2018
Inani elikhulu labantu basezidolophini bayakonwabela ukuchitha ihlobo kwizindlu zabo zasehlotyeni. Batyala igadi yemifuno, bakhathalela imithi yeziqhamo. Abantu abaninzi banomnqweno wokuba neenkukhu ehlotyeni ukuze bafumane ubumnandi, ...
nceda uphendule ngubani owathengile iintlobo zeentyantyambo kunye nezityalo kwi-Esipova L. A. Ndiyalela imali eninzi, ndoyika ukuba ndiya ku khohliswa
Ndicela undixelele ngubani othenge izithole zeentyatyambo nezityalo ku-Esipova L. A.
Imbewu "Poisk", "Aelita", "Gavrish", njl. - zeziphi ezilungileyo? Umzekelo, ukuba imbewu yeentyatyambo, yeyiphi kungcono ukuyithatha?
Imbewu "Poisk", "Aelita", "Gavrish", njl. - zeziphi ezilungileyo? Umzekelo, ukuba imbewu yeentyatyambo, yeyiphi kungcono ukuyithatha? U-Aelita uthathe indawo yentengiso, sithengisa kuphela imbewu yeentyatyambo, kodwa ...
Actinidia. Abalimi abathandekayo, ngubani na okhulayo kakade? Ngaba ukhule i-liana enkulu? Uyamkhathalela njani?
Actinidia. Bantu basegadini abathandekayo, bangaphi kuni esele bayikhulisa? Ngaba ukhule umdiliya omkhulu? Umkhathalela njani? Ndineminyaka esi-7 sikhula actinidia Kolomikta. Ukukhula ngokuqinileyo, sisibini sokugqibela kuphela ...
Ziziphi i aphid?
yintoni iintwala? Isitshabalalisi sitya iintwala, hayi intwala. I-Aphids sisinambuzane esifunxayo ukuya kuthi ga kwi-2 mm ngobukhulu kunye nomzimba ovoid wemibala eyahlukeneyo (iorenji, bomvu, mnyama okanye luhlaza). Uninzi lweentwala ...
Indlela yokukhusela i-sorrel ekungeneni kweembombo ezihlaza okwi-3-4 mm ngobukhulu? Ngaphandle kwekhemistri. Yidla yonke i-sorrel.
Uyikhusela njani i-sorrel ekuhlaseleni i-bugs ezi-shiny eziluhlaza ezi-3-4 mm ngobukhulu? Akukho chemistry. Bayitya yonke isorrel. I-Downy mildew sesinye sezifo eziqhelekileyo zesorrel. Ukuthintela esi sifo ...
indlela yokusebenzisa imbewu ye-ginger kwi-diabetes mellitus
Uyisebenzisa kanjani imbewu ebomvu ebomvu kwisifo seswekile Nantsi into u-Tamara Juranskaya, ingcali yamayeza eengcambu ucebisa athi: “Ndikhethe imbewu ye-redhead (camelina), imifuno ye-rue yebhokhwe (galega) kunye nekhulu leminyaka. Kuyatshintshwa, ndisebenzisa ...
Kwenzeka ngokukhawuleza ukuba i-TUIs ikhule? Ukuba uthatha i-20 encinci, ngesizathu esithile, ii-1.5 ezinkulu ezithe zatsalwa ngaloo nyaka azizange zinyanzele?
I-thuja ikhula ngokukhawuleza kangakanani? I-Thuja yi-ephedra, zonke ii-conifers, xa kuthelekiswa neentlobo ezinqabileyo, zinengcambu embi kakhulu. Ke ngoko, umzuzu onyanzelekileyo xa ufika ...
Kuyinyani ukuba imifuno emnyama ayinayo kwimvelo, kwaye loo miqhamo emnyama esiyithengisayo kwiivenkile, ipeyinti?
Ngaba yinyani ukuba iminquma emnyama ayikho kwindalo, kwaye loo minquma imnyama siyithengisa ezivenkileni inebala? Iminquma emnyama Iminquma evuthiweyo ibizwa ngokuba "yiminquma", noluhlaza ...
Irayisi ikhula njani?
Ikhula njani irayisi? http://ru.wikipedia.org/wiki/Rice Rice (lat. Okanye # 253; za) luhlobo lwesityalo sonyaka esidliwayo kunye nengqolowa yentsapho yeCereals; Inkcubeko yokutya. Isihloko: Igama irayisi lavela eRashiya kuphela ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX, lisuselwa ...
I-Fennel kunye ne-dill iyafana?
Ngaba ipennel nedill yinto enye? fennel nedill, chervil, cilantro, ikumin, i-anise evela kusapho olunye. I-Fennel ikhula ibe yi-petiole. Imifuno kunye nembewu zivumba. Yahlukile kwidill kuloo ...
Yintoni i ngqolowa?
Yintoni ukutya okuziinkozo? Ukutya okuziinkozo okungalunganga okwenzelwe ukutya kwezilwanyana (umzekelo, amahashe). Le yingqolowa engakulungelanga ukondla komntu ngokweeparameter, kodwa ilungele ukondliwa kwezilwanyana ...
I-roses yeeyayi - yintoni loo mbala? Ukuba kunokwenzeka - ifoto.
Yintoni umbala tea roses? Ukuba kunokwenzeka - ifoto. I-rose rose ityheli Ifoto S. Semina iti ngumbala phakathi kombala omthubi kunye nepesika. I-pastel Iphunga liyinto engaqhelekanga! Uthando…
Indlela yokukhulisa i-tulips kwiibhotile?
Ungazikhulisa njani ngokufanelekileyo iitulips kwiimbiza? Iitulips azidingi iimbiza ezinkulu. Izitya ezinobubanzi obuyi-13 cm kufanelekile.Umhlaba kufuneka ukhululwe, uyisanti. Ngomxube, bathatha umhlaba wesoda 30%, humus 40%, kunye ...
Indlela yokufihla iirasi ebusika?
Ungayigubungela njani iiroses ebusika? Eyona nto ibaluleke kakhulu, amasebe espruce! Ewe kungakuhle ukuba uchaze indawo ohlala kuyo! Umzekelo, apha, kwiPrimorsky Territory, ndasika ii-roses, ndishiya i-10 cm ...
Ngaba ukhe watyala iitumato zeentlobo ezahlukeneyo - iqhina kunye neflash? Yabelana ngokuvela kwakho
Ngaba ukhona umntu otyale iitumato zeriddle kunye neflash? Yabelana ngeembonakalo zakho zeflash ebomvu etyaliweyo. eyona nto ibalulekileyo ayikuko ukungxama ukutyala izithole, ikhula ngokukhawuleza okukhulu, kungenjalo iya kuphuma kwaye inyuse ingcambu. yi le…
ziphi iintlobo zeengqungquthela kunye neentyatyambo ze-melon kunye ne-taste of chinanapple inokukhula i-novice. x
Zeziphi iintlobo zethanga ezinencasa yemelon kunye nenanapple flavour onokuqala ukukhula nayo. x. Elona thanga limnandi kakhulu yi nutmeg. Iziqhamo zeli thanga azihlali kamnandi kuphela, kodwa ...
LUK-SEVOK. Yiyiphi ibakala elingcono kunye neqhamo? Kwiidolophu. Ndiyabonga.
LUK-SEVOK. Yeyiphi eyona ndidi ibalaseleyo kunye nemveliso? Kwingingqi yaseMoscow. Enkosi. I-Stuttgarten ayisiyo itswele elibukhali. Ngokuqhelekileyo. Ndiyayithanda i-strigunovsky. Ukuphoxwa ngamatswele abomvu namhlophe. Kodwa ndathandana neekeki. Ngaloo nyaka ...
Luhlobo luni lomgubo ongakhethayo? Kukho uninzi lwawo ngoku, amehlo aphakama ukusuka kukhetho olukhulu. Okanye akukho mmahluko?
Loluphi uhlobo lwedile ekufuneka ulukhethile? Zininzi ngoku, amehlo abaleka kukhetho olukhulu. Okanye mhlawumbi akukho mahluko? Ndithenge iimbewu ezininzi zedile kwaye kulonyaka ...
SOS! Ungasindisa njani iibhola ze-gladiolus ngaphambi kokutshala kwi-thrips?
SOS! Ungazigcina njani iibhaladi zegladiolus ukusuka kwitrips ngaphambi kokutyala? Ishawa eshushu yeebhalbhu V. PAVLOV Ekwindla, wemba iibhaladi zegladiolus, wazomisa wazibeka kwindawo yokugcina izinto. Bancwina ngesiqabu-kude kube sentwasahlobo ...
Imibuzo ye-60 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-9,421.